Keebaa wanaagsan macalimiinta Mourinho iyo Guardiola? Diego Maradona oo si cajiib ah kaga jawaab celiyay – Gool FM
Dajiye November 14, 2018
(Manchester) 14 Nof 2018. Halyayga reer Argentina ee Diego Maradona ayaa xaqiijiyay in tabaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho uu yahay macalinka ugu fiican aduunka, isagoo tilmaamay in xitaa uu ka fiican yahay Pep Guardiola.
Inkastoo uu hoos u dhac weyn ku yimid qaab ciyaareedka kooxda uu hogaamiyo Jose Mourinho ee Manchester United xili ciyaareedkan, isla markaana Pep Guardiola uu horumar weyn ka sameeyay Manchester City, hadana Diego Maradona ayaa wali u arka in Jose uu yahay kan wanaagsan.
Diego Maradona ayaa wareysi uu dhawaan ku bixiyay “Marca” ee dalka Spain wuxuu kaga hadlay macalimiinta Pep Guardiola iyo Jose Mourinho.
“Waxaa la gaaray xiliga wax walba la saxi lahaa, waxaan doonayaa inaan wax badan barto ka tababare ahaan, sidaas darteed waa sababta aan ugu maleenayo inaan u aadi doono magaalada Manchester, si aan Jose Mourinho u weydiiyo waxyaabo badan”.
“Sababtoo ah Jose Mourinho waa macalinka ugu wamaagsan aduunka”.
Intaas kadib Diego Maradona ayaa la weydiiyay in Jose Mourinho uu xitaa ka fiican yahay Pep Guardiola wuxuuna ku jawaab celiyay.
“Aniga ahaan, waxaan dhihi lahaa, haa, Mourinho waa kan ugu fiican, kaliya waxaan dhihi lahaa Guardiola wuxuu cajiib ku yahay hal arin, wuxuu si weyn uga faa’idaystay talooyinka iyo tilmaamaha Johan Cruyff”.
“Waxaan marar badan sheegey in Tiki Takada aysan ahayn fikrada Pep Guardiola, balse ay tahay fikrad ka timid Johan Cruyff”.
“Waqti xaadirkaan, Pep Guardiola ayaa dooran kara ciyaaryahan kasta ee ku sugan aduunka, maamulkiisana way lasoo saxiixan karaan, sida ay ugu sahlanaato Tiki Takada”.
Liverpool oo Lacago Rikoodh ah ku dooneysa Weeraryahan Bur-buriyay Guriga Tababarahooda Jurgen Klopp!!!...(Sidee wax u dheceen??)
DEG DEG: Safka uu ku soo galayo xulkeena Soomaaliya ciyaarta iminka ee Itoobiya